तीन दिनमा कहाँ कति वर्षा ? डण्डा बजारमा ३६१.२ मिलिमिटर – AayoMail
तीन दिनमा कहाँ कति वर्षा ? डण्डा बजारमा ३६१.२ मिलिमिटर
आयाेमेल संवाददाता २०७७ साउन ६ गते २१:१८
पछिल्लो तीन दिनमा नेपालमा एउटै स्टेशनमा साढे तीन सय मिलिमिटरसम्म वर्षा मापन भएको छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, हावापानी विज्ञान महाशाखाका अनुसार गत आइतबार यता सबैभन्दा बढी वर्षा नवलपरासीको कावासोती, डण्डा बजारमा मापन भएको छ।
महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद् डा. इन्दिरा कँडेलका अनुसार त्यहाँ तीन दिनको अवधिमा ३५१.२ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ। जुन मुलुकभर रहेका एक सय ९० वटा वर्षा मापन केन्द्रमध्ये सबैभन्दा बढी हो।
डण्डामा पछिल्लो २४ घन्टामा १०५.८ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ। त्यसअघि सोमबार १५७. ८ र आइतबार ८७.६ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो।
त्यसैगरी, बाराको कोल्भी क्षेत्रमा पनि अधिक वर्षा मापन भएको छ। त्यहाँ तीन दिनमा ३२५ मिलिमिटर वर्षा भएको तथ्यांक छ। कोल्भीमा पछिल्लो २४ घन्टामा १६८.८ वर्षा भएकोमा त्यसअघि सोमबार १५६ र आइतबार ०.२ मिलिमिटर वर्षा भएको रेकर्ड छ।
तीन दिनमा सबैभन्दा बढी वर्षा भएको तेस्रो स्थानमा कास्कीको घारेढुंगामा छ। जहाँ ३०१.४ मिलिमिटर पानी परेको छ।
महाशाखाका अनुसार त्यहाँ पछिल्लो २४ घन्टामा ११९.४ मिलिमिटर वर्षा भएको रेकर्ड छ। सोमबार १६९ र आइतबार २४ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो।
यसैगरी, गोरखाको आरुघाटमा पनि भारी वर्षा भएको छ। त्यहाँ तीन दिनमा २८१ मिलिमिटर वर्षा भएको छ। महाशाखाका अनुसार त्यहाँ पछिल्लो २४ घन्टामा १६०.२ मिलिमिटर वर्षा भएको छ। त्यसअघि सोमबार १११.६ र आइतबार ९.२ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो।
तीन दिनमा अधिक वर्षा भएको पाँचौ स्थानमा मकवानपुरको मकवानपुरगढी छ। जहाँ पछिल्लो २४ घन्टामा अधिक वर्षा १९९.२ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ। महाशाखाका अनुसार त्यहाँ तीन दिनमा २६६.२ मिलिमिटर पानी परेको छ। त्यसअघि सोमबार ५९ र आइतबार ८ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ।
तीन दिनमा सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा वर्षा भएको छ, भने कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम।
२४ घन्टामा कहाँ कति वर्षा?
पछिल्लो २४ घन्टामा मकवानपुरको मकवानपुरगढीमा सबैभन्दा बढी वर्षा भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, हावापानी विज्ञान महाशाखाका अनुसार २४ घन्टामा १९९.२ मिलिमिटर वर्षा भएको छ।
महाखाका अनुसार मकवानपुरगढीसहित चार स्टेशनमा एक सय ५० मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा भएको छ। रुपन्देहीको सूर्यापुरीमा १९२.६, बाराको कोल्भीमा १६८.८ र गोरखाको आरुघाट १६०.२ मिलिमिटर वर्षा भएको तथ्यांक छ।
१७ वटामा एक सय मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा मापन भएको छ।
महाशाखाका अनुसार ललितपुरको गोदावरीमा १३६.८, धनुषाको कमला नदी (तित्रिया) १२३.२, पोखरा विमानस्थल १२६.८, रुपन्देहीमा १२१.६ र लमजुङको घारेढुंगामा ११९.४ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको हो।
त्यस्तै, पोखरा ११८.७, लमजुङको बेसिसहर ११२.४,ललितपुरको खोकनामा १०७.८, नवलपुरको डाँडामा १०५.८, कपिलबस्तुको बाणगंगामा १०८.८, कास्कीको खुदिबजारमा १०६ र तनहुँको स्याम्घामा १०३.४ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ।
त्यस्तै, ५१ वटामा ५० मिलिमिटरभन्दा बढी, एक सय चारमा २५ मिलिमिटरभन्दा बढी र एक सय ३२ मा १० मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा मापन भएको छ।
यो मापन साउन ५ गते बिहान ८ः ४५ देखि साउन ६ गते बिहान ८ः ४५ सम्मको हो।
न्यूनचापीय रेखा फेरि नेपाली आकाश माथि आएर बसेकाले देशभर वर्षा भइरहेको हो। वर्षा अझै पाँच दिनसम्म जारी रहने अनुमान छ। यसअघि असार अन्तिम साता करीब चार दिन भारी वर्षा भएको थियो। तर न्यूनचापीय रेखा तराईदेखि दक्षिणतिर गएपछि वर्षा केही दिन थामिएको थियो।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार मनसुन सुरु भए (जेठ ३०) यता बाढीपहिरो र चट्याङमा परेर एक १४ जनाको ज्यान गइसकेको छ। गत २४ घन्टामा मात्र ३१ स्थानमा पहिरो गएको छ, भने ११ स्थानमा बाढी गएको छ।